Archive du 03-nov-2020
Tifania, 7 taona
maty voaolana Aretinandoha sy kibo no nampitaraina azy
Ny alinny alahady hifoha omaly alatsinainy no nindaosinny fahafatesana i Tifania, ilay zazavavikely 7 taona monina eny Anosibe izay niharanny fanolanana niverimberina sy efa naharitra.
Manadio tarehy, arakaraky ny hodi-tava
Miantoka ny fahasalamanny hodi-tava ny fampiasana ny démaquillant, noho izy manadio sy miaro azy.
Nanao firaisana ara-nofo taminny olon-tiako aho.
Taorianizay dia lasa narary valahana foana isanandro nefa taloha tsy nanao izany. Marihiko fa 2 na 3 andro talohanio ny 14eme jour-ko fa tsy nalefa tany akory ny tsirinaina.
Sohika, tosi- drà, diabeta
Ireo « jus » manasitrana azy!
Fantaro ireo zava-pisotro natoraly mitondra voka-tsoa ho anny fahasalamanao. Totoina miaraka aminny mixeur fotsiny izy ireo
Manatsara sy mampiakatra ny nono
Tsy misy hozatra tokoa ny nono saingy azo hatao ny manamafy ny hozatra manodidina azy izay mihazona azy tsy hirokaka sady hampiakatra azy koa. Hanampy anao aminizany ireto :
Ketrika.com : ireo antony hisafidianana azy aminireo tsena en ligne hafa
Tato anatinny taona vitsy izay dia tsapa fa manamora kokoa ny fiainana ny fisianny famarotana entana aminny alalanny aterineto.
Manadio ny sofinny zazakely
Faritra iray anisanny saro-pady aminny vatanny zazakely ny sofiny. Toy ny maso sy ny foitra dia tsy tokony hatao ambanin-javatra ny fahadiovanizy io.
Alarobia : Epinara sy henan-kisoa  8.500Ar
Akora ilaina Epinara  2.000Ar Henan-kisoa ½ kg  6.000Ar
Adopter la chemise pour un look passe-partout
Des looks faciles et efficaces ? On peut en fabriquer avec nos chemises. Des looks qui nous représentent et qui nous donnent une certaine confiance en soi, ainsi quun réel confort. Avec les chemises,
Céline Dion : 5.000 mahery ny kirarony
Ny ankamaroanny vehivavy dia manana kiraro mihoatra ny 5, raha kely indrindra. Ho anireo tena mankafy kiraro dia misy manana efitrano iray, na roa na telo natokana ho anizany fotsiny. Tsy any am-pitan-dranomasina ihany fa eto amintsika koa. Ho anireo olo-malaza any am-pita dia misy manao azy itony ho harena sarobidy mihitsy.
ireo tsara ho fantatra !
Zava-dehibe mihitsy ny fahadiovanny zazakely. Raha tiana ho salama ny zaza, dia aza adinoina mihitsy ny mampandro azy. Ireto ny tsara ho fantatra sy ny torohevitra momba io fampandroana zaza io.
«Position » mampatsiro ny firaisana ara-nofo !
Tsy mitsaha-mandroso ny fomba hahatakarana ny fahafinaretana faratampony, momba ny firaisana ara-nofo. Efa misy izao ny fipetraka firaisana vaovao, sy hiaka farany, hahafahana tonga aminny faratampony. Aigle déployé no anarany.
Shopping « Pêle-mêle »
1. Tasse imprimé - 10.000Ar  Page Facebook « ChrisArt Mada »  Contact : 034 76 104 08 2. Plateau  8.000Ar - Page Facebook « ChrisArt Mada »  Contact : 034 76 104 08
ADY AMINNY DORO TANETY Hamboly hazo 100.000 fototra ny Telma hatraminny faranny taona
Handray anjara aminny ady aminny doro tanety izay mandripaka ny ala sy ireo zava-mananaina eto amintsika ny orinasam-pifandraisana Telma.
Tetikasa PASAN-Sahaza : niverina ny fampiofanana ireo mpampiofana
Niverina indray ny fampiofanana ireo mpampiofana tanterahina eo anivonny tetikasa PASAN-SAHAZA (Projet dAmélioration pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition) rehefa nitsahatra noho ny fihibohana nisy teto amintsika.
Vaky trano tao Cité Mandroseza Taminny 1 ora atoandro
Ady aminny tsy fanjarian-tsakafo any Atsimo Natomboka omaly ny tetikasa « Mahakama Ho An'Ny Atsimo »
Natomboka sy nosokafana taminny fomba ofisialy omaly alatsinainy ny tetikasa Mahakama Ho An'Ny Atsimo. Hetsika tolo-tanana hanampiana ireo havantsika iharan'ny kere any amin'ny faritra Atsimon'i Madagasikara izy io.
AkoorDigue Manomana kilalao maro ho anny faranny taona
Manomana kilalao maro, ho famalifaliana ny fianakaviana malagasy ny Akoordigue, aminity faranny taona ity. Hiaraha-mahalala moa ny fihibohana teo izay tsy nahafahanny ankabeazanny olona nivoaka ny trano nifaly.
« Alzheimer Masoandro Mody » Nahazo vola 700.000 Ariary, ho anny «atelier couture »
Notoloranny klioba « Ladies Circles Madagascar » vola mitentina 700.000 Ariary ny fikambanana « Alzheimer Masoandro Mody ».
Kere any Androy Nanampy ny Minisiteranny Asam-panjakana
Mifandrimbona midina ifotony mijery ny zava-misy sy mitondra fanampiana any amin'ny Faritra Atsimonny Nosy izay tena hianjadianny tsy fanjarian-tsakafo ireo Minisitra isan-tsokajiny aminizao fotoana.
Laza adina Baka niparitaka Afaka madiodio ilay mpampianatra sy ny mpianany 3
Nivoaka omaly alatsinainy 02 Novambra 2020 ny didy mahakasika ny fitoriana momba ny fiparitahana laza adina Bakalorea sandoka ka nampidirana am-ponja vonjimaika ny mpampianatra iray sy ny mpianany telo, talohanny fanadinana bakalorea teo.
KERE ANY ATSIMO Olona miisa 27.000 ireo tena marefo
Olona miisa 1.620.000 farafahakeliny no tratry ny tsy fanjarian-tsakafo any aminny faritra atsimonny Nosy aminizao.
ARIVONIMAMO Hahazo orinasa mpanodina voatabia
Hahazo orinasa kely mpanodina voatabia havadika ho lasa ketchup ny any aminny distrikanArivonimamo.